Imigaqo nemiqathango | I-Crypto Gator | Eyona Dijithali yeMali ilungileyo, iBlockchain kunye neAgregregator yeNdaba yeendaba
Sigcina ilungelo nangaliphi na ixesha loku:
Naluphi na utshintsho esilenzayo kwiMigaqo neMeko luya kusebenza kwangoko emva kokuba sithumele iMiqathango neMiqathango kwi-CryptoGator.co.
Lonke ulwazi kunye nomnye umxholo obonisiweyo, ogqithisiweyo, okanye osetyenzisiweyo ngokunxibelelene neeSayithi zeCrypto Gator, kubandakanya umzekelo, intengiso, izikhombisi, izikhokelo, amanqaku, izimvo, uphononongo, isicatshulwa, iifoto, imifanekiso, imifanekiso, iiklip zomsindo, ividiyo, html, umthombo kunye nekhowudi yento, isoftware, idatha, ukhetho kunye nolungelelwaniso lwento esele ikhankanyiwe kunye "nokujonga nokuziva" kweeSayithi zeCrypto Gator (ngokudibeneyo, "uMxholo"), zikhuselwe phantsi kwamalungelo obunini afanelekileyo kunye nolunye ubambiswano ( kubandakanya kodwa kungaphelelwanga kwipropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda) amalungelo kwaye ayipropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda ye-Crypto Gator, kunye neenkampani ezinxulumene nayo, abaniki layisenisi kunye nababoneleli. I-Crypto Gator ikhusela ngokubonakalayo amalungelo ayo kuMxholo ukuya kuthi ga kumthetho.
Unokusebenzisa umxholo kwi-Intanethi kwaye usebenzise ngokwakho, hayi ukuthengisa, kwaye unokukhuphela okanye uprinte ikopi enye yazo naziphi na iziqulatho zomxholo wakho, ungasebenzisi ezorhwebo, ukuba awususi naluphi na uphawu lwentengiso, ilungelo lokushicilela okanye esinye isaziso esikwesi siqulatho. Umzekelo, awunakuphinda ushicilele uMxholo nakweyiphi na i-Intanethi, i-Intranet okanye isayithi ye-Extranet okanye ufake uMxholo kuyo nayiphi na idathabheyisi, ingqokelela, indawo yokugcina okanye ukugcina okanye ukugcina umxholo kwifom ye-elektroniki kwikhompyuter yakho okanye isixhobo esiphathwayo ngaphandle kokuba kuvunyelwe yi-Crypto IGator. Awunakho ukuhambisa nayiphi na into yesiqulatho kwabanye, nokuba uyahlawula okanye awuyihlawuli okanye uyithathele ingqalelo, kwaye awunakuguqula, ukukopa, isakhelo, ukuvelisa kwakhona, ukuthengisa, ukupapasha, ukuhambisa, ukubonisa okanye ukusebenzisa enye indawo yesiqulatho, ngaphandle kwe kuvunyelwe yiMiqathango neMiqathango okanye ngokukhusela imvume ebhaliweyo ye-Crypto Gator.
Umxholo ubandakanya iilogotypes, uphawu lwentengiso kunye neempawu zenkonzo (ngokudibeneyo "Amanqaku") aphethwe zii-eBggains Today Online Store Ltd., kunye neeMark zabanye ababoneleli ngolwazi kunye nabantu besithathu. Umzekelo, "I-Crypto Gator" luphawu lwentengiso olubhalisiweyo lwee-eBargains Today Online Store Ltd. Akukho manqaku anokusetyenziswa nangayiphi na indlela ngaphandle kokuba ivunywe kwangaphambili, ngokubhaliweyo yi-eBargains Today Online Store Ltd.
Izicelo zokusebenzisa uMxholo ngayo nayiphi na injongo ngaphandle kokuvunyelwa kwiiMeko neMeko kufuneka zingeniswe inkxaso@cryptogator.co.
I-Crypto Gator iyayihlonipha ipropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda wabanye. Ukuba uyakholelwa ukuba umsebenzi wakho ukhutshelwe ngendlela yokophula umthetho welungelo lokushicilela okanye unolwazi lwayo nayiphi na into ephule umthetho ebekwe naliphi na iqela lesithathu kwiWebhusayithi, nceda unxibelelane nommeli welungelo lokushicilela, ngokubhala, nge-imeyile ku inkxaso@cryptogator.co
Attn: Ummeli welungelo lokushicilela, kwaye ubonelele ngolu lwazi lulandelayo njengoko kufunwa nguMthetho wokuThintela uLwaphulo-mthetho kwi-Intanethi kuMthetho we-Digital Millennium Copyright Act, 17 USC Icandelo 512 (c) (3):
Ulwazi, iimveliso kunye neenkonzo kwiiSayithi zeCrypto Gator zinikezelwa ngokungqongqo "njengoko kunjalo," "kuphi" kwaye "apho kufumaneka khona". I-Crypto Gator ayiniki naziphi na iwaranti (nokuba zichaza okanye zichaziwe) ngokubhekisele kulwazi olunikezwe nakweyiphi na I-Crypto Gator indawo kunye / okanye ukusebenzisa kwakho nayiphi na I-Crypto Gator Iindawo ngokubanzi okanye nayiphi na injongo. I-Crypto Gator ukuveza ngokucacileyo naziphi na iziqinisekiso ezichaziweyo, kubandakanya kodwa kungaphelelanga apho, iiwaranti zetayitile, ukungaphuli umthetho, ukurhweba okanye ukulungela injongo ethile. I-Crypto Gator ayizukubenoxanduva lwayo nayiphi na ilahleko okanye umonakalo onokubangelwa kukuqhawulwa ngabantu besithathu kuyo nayiphi na ingcaciso enikwe ukuba ifumaneke kuwe I-Crypto Gator IiSayithi okanye nayiphi na kuzo. Nangona ulwazi olunikezwe kuwe kule webhusayithi lufunyenwe okanye luqulunqwe kwimithombo esikholelwa ukuba inokuthenjwa, I-Crypto Gator ayikwazi kwaye ayiqinisekisi ukuchaneka, ubunyani, ixesha elifanelekileyo, okanye ukugqibelela kwalo naluphi na ulwazi okanye idatha efumaneke kuwe ngenjongo ethile. Akunjalo I-Crypto Gator, nayo nayiphi na indibaniselwano yayo, abalawuli, amagosa okanye abasebenzi, okanye nabanikezeli bomxholo wesithathu, isoftware kunye / okanye itekhnoloji (ngokudibeneyo,I-Crypto Gator amaqela ”), uya kubanoxanduva okanye abenoxanduva lwalo naluphi na uhlobo ngayo nayiphi na ilahleko okanye umonakalo othe wenzeka kuwo xa uthe wasilela okanye waphazamiseka nakuyiphi na I-Crypto Gator indawo, okanye ngenxa yesenzo okanye ukushiya naliphi na elinye iqela elibandakanyekayo ekwenzeni nayiphi na I-Crypto Gator indawo, idatha equlethwe kuyo okanye iimveliso okanye iinkonzo ezinikezelweyo kuwe, okanye nakweyiphi na enye into enxulumene nokufikelela kwakho, ukungakwazi ukufikelela, okanye ukusebenzisa nayiphi na I-Crypto Gator indawo okanye izinto eziqulethwe apho, nokuba iimeko ezingunobangela wazo bezingaphantsi kolawulo lwe I-Crypto Gator okanye nawuphi na umthengisi onika isoftware okanye iinkonzo.
Akukho mcimbi uya kuthi I-Crypto Gator okanye nayiphi na I-Crypto Gator amaqela anoxanduva lokukuthwala, nokuba kungokwesivumelwano okanye ukungcungcuthekisa, nangawo nawuphi na umonakalo othe ngqo, okhethekileyo, ongathanga ngqo, olandelwayo okanye owenzekileyo okanye nawuphi na omnye umonakalo nakowuphi na uhlobo nokuba I-Crypto Gator okanye naliphina elinye iqela elinjalo licetyisiwe malunga nokwenzeka kwako. Olu thintelo kwityala lubandakanya, kodwa aluphelelanga, ukuhanjiswa kwazo naziphi na intsholongwane ezinokuthi zichaphazele izixhobo zomsebenzisi, ukusilela kwezixhobo zoomatshini okanye ezombane okanye iintambo zonxibelelwano, umnxeba okanye ezinye iingxaki zonxibelelwano (umzekelo, awukwazi ukufikelela kumnikezeli wakho weenkonzo ze-intanethi) , ukufikelela okungagunyaziswanga, ubusela, iimpazamo zomqhubi, uqhankqalazo okanye ezinye iingxaki zomsebenzi okanye nayiphi na into enamandla I-Crypto Gator ayikwazi kwaye ayiqinisekisi ukufikelela okuqhubekayo, okungaphazanyiswa okanye okukhuselekileyo kuyo nayiphi na indlela I-Crypto Gator Iindawo.
Zonke izimvo zababhali zezabo kwaye azenzi ngcebiso yezemali nangayiphi na indlela. Akukho nto ipapashwe ngu-Crypto Gator owenza isindululo sotyalo mali, kwaye akufuneki nayiphi na idatha okanye umxholo opapashwe ngu I-Crypto Gator kuxhomekeke kuyo nayiphi na imisebenzi yotyalo mali.
UCrypto Gator ucebisa ngamandla ukuba wenze olwakho uphando oluzimeleyo kunye / okanye uthethe nengcali yotyalo-mali efanelekileyo ngaphambi kokwenza naziphi na izigqibo zemali.
Amakhonkco athile, kubandakanya ikhonkco lomxholo, kwindawo yethu aya kukusa kwiiwebhusayithi zangaphandle. Ezi zinto zibonelelwe ukulungiselela wena kunye nokubandakanywa kwayo nayiphi na ikhonkco ayithethi ukuvuma okanye ukuvunywa ngu-Crypto Gator wesiza esixhumeneyo, umqhubi okanye umxholo wayo. Nganye yezo webhusayithi ine "iMiqathango neMeko" yazo. Asinaxanduva lomxholo wayo nayiphi na iwebhusayithi engaphandle kweeSayithi zeCrypto Gator. Asibek 'esweni kwaye asithathi xanduva lokubeka iliso kumxholo wazo naziphi na iiwebhusayithi zomntu wesithathu.
Iikhukhi ziifayile ezincinci zetekisi ezifakwe kwikhompyutheni kwiiwebhusayithi ozivakatyelayo. Ziyasetyenziswa ngokubanzi ukwenzela ukwenza iiwebhusayithi zisebenze, okanye zisebenze ngokuchanekileyo, kwakunye nokubonelela ngolwazi kubanikazi beziko.
Ezi cookies zisetyenziselwa ukuqokelela ulwazi malunga nendlela abatyeleli abayisebenzisa ngayo indawo yethu. Sisebenzisa ulwazi ukuqokelela iingxelo nokusinceda ukuphucula indawo. Iicookies ziqokelela ulwazi ngendlela engaziwayo, kubandakanya nenani labatyeleli besiza, apho iindwendwe zize khona kwisiza kunye namaphepha abebetyelele.
Ngokusebenzisa iwebhusayithi yethu, uyavuma ukuba singazibeka ezi ntlobo zeicookies kwisixhobo sakho.
ImiQathango neMiqathango kunye nesivumelwano esenziwe ngale ndlela (“isiVumelwano”) siyakulawulwa, sithatyathwe kwaye sinyanzeliswe ngokungqinelana nemithetho yePhondo laseBritish Columbia, Canada, ngaphandle kokuphikiswa kwemithetho. Ngaphandle kokuba kuvunyelwene ngenye indlela ngokubhaliweyo nguwe nathi, nayiphi na imbambano evela okanye enxulumene nesiVumelwano, okanye ulwaphulo lwento, iya kugqitywa isonjululwe ngumlamli olawulwa yiCanada Arbitration Association phantsi kwayo Imithetho yoLamlo loRhwebo, okanye umzimba wolamlo njengoko kufuneka ngumthetho, umthetho okanye ummiselo, kunye nesigwebo kwimbasa enikezelwe ngumlamli zinokungena kuyo nayiphi na inkundla enegunya. Ulamlo luya kwenziwa ngolwimi lwesiNgesi phambi komgwebi omnye kwiSixeko saseVancouver, eBritish Columbia, eCanada. Ulamlo olunjalo kufuneka luqale kunyaka omnye (1) emva kokuba ibango okanye unobangela wento ethe yavela. Ukuba ngenxa yaso nasiphi na isizathu nasiphi na isibonelelo sesi siVumelwano, okanye inxenye yaso, ayinakunyanzeliswa, loo malungiselelo aya kunyanzeliswa ukuya kuthi ga kwinqanaba elivumelekileyo ukuze kuzalisekiswe injongo yesi siVumelwano, kwaye intsalela yesi siVumelwano iya kuqhubeka isebenza ngokupheleleyo kunye nefuthe. Esi siVumelwano sisonke isivumelwano phakathi kwethu nawe ngokubhekisele kwiiCrypto Gator Sites kwaye sithatha indawo yonke kunxibelelwano lwangaphambili okanye lwangoku, izivumelwano kunye nokuqonda phakathi kwethu nawe ngokubhekisele kumbandela woku. Inguqulelo eprintiweyo yesi siVumelwano iya kwamkeleka kwinkqubo yezomthetho okanye yezolawulo.
Nawaphi na amalungelo anganikwanga ngokucacileyo apha agciniwe.
© 2020 ii-eBggains namhlanje Ivenkile yeevenkile ezikwi-Intanethi.
Ukuhlaziywa ngo-Okthobha 1, 2020